Ndenye Ụzọ ndabere iPhone Data ka Mac na / enweghị iTunes
Olee otú m nwere ndabere faịlụ, gụnyere music, foto, na vidiyo si na m iPhone ka MacBook Pro na-agba ọsọ na OS X Mavericks? iTunes dị nnọọ jụrụ ime ihe ọ bụla dị ka ya syncs faịlụ na iPhone. Biko nyere. N'ihi! - Owen
Iji hụ na nche nke gị iPhone ntọala na faịlụ, ị ga-ndabere gị iPhone mgbe nile. Ozugbo ihe na-aga na-ezighị ezi na gị iPhone, ị nwere ike mfe weghachi gị iPhone na ọhụrụ iPhone ndabere na ị na mere. Na-esonụ, ngwọta na-ndabere iPhone ka Mac nakwa dị ka yiri ọmụma na-kpuchie. Pịa agụ akụkụ ị nwere mmasị na:
Part 1. ndabere iPhone ka Mac: enweghị iTunes & na iTunes
Part 2. iPhone ndabere File ebe na so File iche
Part3. Ndabere iPhone Music / foto / Videos ka Mac
Part 4. iPhone ndabere extractor maka Mac
Ndabere iPhone enweghị iTunes
Ndabere iPhone ka Mac site iTunes
Ọ bụrụ na ọ bụ na-eweta nsogbu n'ihi na ị na jikọọ gị iPhone na Mac nkwado ndabere na mpaghara iPhone ka Mac site iTunes, i nwere ike na-amasị iji iCloud nkwado ndabere na mpaghara iPhone ka Mac-enweghị iTunes. Ọ bụ ezigbo mfe ndabere iPhone ka Mac na iCloud. Naanị ihe ị mkpa ijide n'aka bụ na netwọk bụ ike. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ nkwado ndabere na mpaghara iPhone ka Mac-enweghị iTunes, ma iCloud.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na Wi-Fi-eme ka n'aka netwọk bụ anụ;
Nzọụkwụ 2. Kpatụ Ntọala> iCloud. Si ebe a, i kwesịrị itinye gị iCloud akaụntụ ma ọ bụ Apple ID. Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu ma, ị ga-edeba aha onye mbụ.
Nzọụkwụ 3. Kpatụ Nchekwa & ndabere na mgbe ahụ ehichapụkwa iCould ndabere on. Enweta Back Up Ugbu a.
Na-ewere na nche nke onwe ozi echiche, ụfọdụ ndị na-achọghị ka ndabere iPhone site iCould, igwe-oji ozi, ma na-ahọrọ iji iTunes. Dabara nke ọma, ọ bụ nnọọ mfe nkwado ndabere na mpaghara iPhone ka Mac site iTunes kwa. N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone na gị Mac site na gị iPhone eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Pịa iTunes View menu ma họrọ Gosi sidebar.
Nzọụkwụ 3. Pịa gị iPhone n'okpuru NGWAỌRỤ na sidebar. Si n'akụkụ aka nri, ị pụrụ ịhụ nhọrọ Backups. Họrọ kọmputa a na Back Up Ugbu a. Ọ bụ ya!
Ebe ahụ iPhone ndabere faịlụ na Mac?
Mgbe ị ndabere iPhone ka Mac, i nwere ike ịhụ na nkwado ndabere faịlụ na a ndekọ: Library / Ngwa Nkwado / MobileSync / ndabere. Iji ego niile iPhone backups, ị kwesịrị ị jide Wụk, Mgbanwe, na G isi na keyboard aka Gaa menu. Tinye ozugbo: Library / Ngwa Nkwado / MobileSync / ndabere.
Olee ụdị faịlụ na-gụnyere ke ndabere?
Onye ọ bụla ndabere na ị na mere na iTunes agụnye kpọọ vidiyo na ihe oyiyi na iPhone Igwefoto Roll, kọntaktị na kọntaktị ọkacha mmasị, kalenda akaụntụ na kalenda ihe, safari ibe edokọbara, ndetu, na ndị ọzọ. Ihe ọmụma zuru ezu, biko pịa ebe a >>. Faịlụ na iPhone ndabere nwere ike ghara hụrụ na ekemende. Otu ụbọchị, ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ihe ọ bụla faịlụ site iPhone ndabere, ị chọrọ onye iPhone ndabere extractor maka Mac.
Part 3. ndabere iPhone Music / foto / Videos ka Mac
M kwuru otú ndabere ihe iPhone site na iTunes n'elu. Otú ọ dị, nke a ndabere naanị dere iPhone ntọala, faịlụ na iPhone Igwefoto Roll, na zụrụ ngwa. Media faịlụ na iPhone, dị ka songs dị si CD, foto na iPhone Photo Library, na Internet ebudatara videos-apụghị kwadoo si iPhone ka iTunes mgbe niile.
Ihe ị ga-mkpa:
A Mac na iTunes arụnyere
Your iPhone na eriri USB
Wondershare TunesGo (Mac) - ndabere iPhone Media faịlụ ka Mac
Mbupụ niile songs na listi ọkpụkpọ site na iPhone ka Mac iTunes Library;
Ndabere Photos si iPhone ka Mac enweghị ihe ọ bụla hassle;
Ndabere iPhone ọdịyo faịlụ na vidiyo na Mac dị iche iche nchekwa;
Akwado multiple iPhones, gụnyere iPhone ọhụrụ 5s, na ndị ọzọ >>
Download free ikpe version nke Wondershare TunesGo (Mac) na wụnye ya na gị Mac. Mgbe ị wụnye ya, malite ya ozugbo. Jikọọ gị iPhone na gị Mac site eriri USB. Ị pụrụ ịhụ na Wondershare TunesGo (Mac) ga-achọpụta rụọ gị iPhone na-akpaghị aka na-egosiputa ya na isi window.
Nzọụkwụ 2. ndabere iPhone Media faịlụ ka Mac
# 1. Ndabere iPhone Music ka Mac. Pịa Music ke sidebar na mgbe ahụ ị pụrụ ịhụ niile songs na-egosipụta na nri. Họrọ chọrọ ndị na pịa Export ma ọ bụ Mbupụ na iTunes nkwado ndabere na mpaghara ha ma na a na nchekwa ma ọ bụ iji iTunes Library na gị Mac. Site na ịpị listi ọkpụkpọ na nri sidebar, ị pụrụ ịhụ na nkwado ndabere iPhone listi ọkpụkpọ iji Mac kwa.
# 2. Ndabere iPhone Photos ka Mac. Pịa Photos na ekpe sidebar, mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ na foto niile na gị iPhone na-echekwa na Photo Library, Igwefoto Roll na albums. Họrọ ndị a gị mkpa ma pịa Export nkwado ndabere na mpaghara ha gị Mac.
# 3.Backup iPhone Videos ka Mac. Ọ bụrụ na ị na-aga na nkwado ndabere na mpaghara iPhone gbara vidiyo na Mac, pịa Photos. Chọta videos na igwefoto Roll na mbupụ ha gị Mac.
E wezụga music, photos, fim, ị nwekwara ike iji Wondershare TunesGo (Mac) nkwado ndabere na mpaghara Audiobooks, Voice Memos, iTunes U, Pọdkastị, na ndị ọzọ ka gị na Mac.
Video Tutorial: Olee otú ndabere iPhone Media faịlụ ka Mac
Ọ bụrụ na ị mkpa ụfọdụ otu faịlụ site na iPhone ndabere faịlụ na Mac, ị chọrọ onye iPhone ndabere extractor maka Mac inyere ya aka. Ọ bụrụ na i nwere adịghị echiche ọ bụla banyere nke a ụdị ngwá ọrụ, m nwere ike ikwu ị na-agbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery). Ọ ga-heps ị wepụ faịlụ site na iPhone iTunes ndabere, gụnyere videos, photos, kọntaktị, ozi, wdg
Download iPhone ndabere extractor inwe a na-agbalị ugbu a!
Copy Photos si iPhone ka Mac
Nyefee Videos si iPhone ka Mac
Nyefee Music si iPhone ka Mac
Import iPhone Ndi ana-akpo ka Mac
Atụmatụ na iPhone ka Mac Nyefee
Best ngwa ọdịnala na iPhone
Save iPhone Ozi PC
Otú nyefee MP3 ka iPod
Export iPhone Ndi ana-akpo ka Gmail
Export Playlist si iPhone ka iTunes
Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka PC
> Resource> iTunes> Atụmatụ & Aghụghọ maka Olee otú ndabere iPhone ka Mac